SAWIRO:Wasiirka Waxbarashada & Tacliinta Sare ee Puntland oo dugsi cusub xariga ka jaray – DMS
HomeWararkaSAWIRO:Wasiirka Waxbarashada & Tacliinta Sare ee Puntland oo dugsi cusub xariga ka jaray
asiirka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Puntland Mudane Abdulahi Maxamed Xasan ayaa xariga ka jaray Dugsi Hoose oo cusub kaasoo ay dhismihiisa maalgelisay Hay’adda Qatar ayna fulisay Jimciyada Tadamun. Dugsiga ayaa loogu magac Daray Al-Salaam wuxuuna hoos imaanayaa Dugsiga Weyn ee Imaamu Nawawi Garowe.
Maamulaha Dugsiga Imaamu Nawawi ayaa sheegay in Dugsigu baahi weyn uqabay qaybtan cusub ee lagusoo kordhiyey maadaam ay ardaydiisu kor u dhaaftay in kabadan 3200 Arday, “Dusgisaga ayaa Jimciyada Tadamu aasaastay sanadkii 2006 ayadoo lagu furay 80 arday, wuxuuna hada marayaa tiro kabadan 3200 arday oo isugu jira Hoose, Dhexe iyo Sare” ayuu yiri Maamule Abdidahir Abshir.
Guddoomiyaha Jimciyada Tadamun Abdirahman Abdirisaq ayaa uga mahadceliyey kaalinta mugga leh ee ay Qatar Charity ka ciyaarto horumarinta waxbarashada Somalia guud ahaan Puntland na gaar ahaan. Wuxuu xusay in Qatar Charity ay kala shaqeeyeen Dhismaha xarumo waxbarasho kale oo aan ahayn Dugsiga Alsalaam ee maanta xariga laga jaray kuwaas laga hirgeliyey meelo kala duwan oo Puntland ku yaaal. Guddoomiyaha Ayaa tilmaamay in Jimciyada Tadamun ay marwalba fuliso Siyaasada Waxbarashada dowladda Puntland ayna ugu muhiimsantahay in lasoo saaro Arday Tayo leh oo wax ku barto deegaan ku haboon Waxbarashada.
Wakiilka ka socday Hay’adda Qatar Charity Maxamed Macallin Aadan ayaa uga mahadceliyey Wasiirka inuu xariga ka jaro Dugsigan cusub, wuxuuna sheegay in Qatar Charity ay marwalba garab taagantahay bulshada Reer Puntland, Dugsiga Al-salaam na uu qayb kayahay baahiyaha Waxbarashada ee ka jira gayiga Puntland taasoo ay ka ka jawaabtay QC. Wuxuuna u rajeeyey Maamulka Jimciyada iyo Iskuulkuba inay bulshada si fiican uga faa’iideeyaan Dugsiga.
Wasiir WW&TS Mudane Abdulahi M.Xasa ayaa Cabiray dareenkiisa farxadeed maadaama uu noqonayo Dugsiga Al-Salaam Kii ugu horeeyey oo uu xariga ka Jaro inta xilka loo magacaabay, wuxuuna uga mahadceliyey Qatar Charity oo kaashanaysa Jimciyada Tadamun inay hirgeliyaan Dugsi noocaan oo kale ah kaasoo si yato loo dhisay isla markaana loo qalabeeyey. Wuxuu u dardaarmay Maamulka dugsiga iyo Waalidiintaba inay Dugsiga ilaaliyaan oo hadafkii loo dhisayna hirgeliyaan.
Dhismaha Dugsiga ayaa ka kooba 5 Fasal, Xafiisyada Maamulaha iyo Maaliyada, Xafiiska Macallimiinta iyo Suuliyada Ardayda oo kala qaybsan Gabdho iyo Wiilal iyo Istooro Wax lagu kaydiyo.
Ugu dambeyntii Xafladda ayaa Jawi qurux badan kusoo dhamaatay waxaana Ardaydii ka soo qaybgashay loo qaybiye Keeg kaasoo ku xardhanaa Calamada Somalia iyo Qatar.
Malashiyaad hubaysan oo gudoomiye degmo dhaawacay 3 ruuxna dilay
DAAWO:Aabaha Caa’isha Ilyaas oo walaac ka muujiyay qaab uu u socdo kiiska gabadhiisii